HomeKit - ဘာလဲ၊ နောက်ဆုံးပေါ်လိုက်ဖက်တဲ့ထုတ်ကုန်များ - iPhone News | အိုင်ဖုန်းသတင်း
HomeKit (CASA App Store တွင်စပိန်ရှိ App Store) သည်ကွဲပြားခြားနားသောသဟဇာတဖြစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသော application တစ်ခုဖြစ်သည် သင့်အိမ်ကိုအသံဖြင့်ထိန်းချုပ်ပါ။ ဤအချက်ကြောင့်အလင်းကိုဖွင့်ခြင်း၊ မည်သည့် sockets များကို activate လုပ်သည်သို့မဟုတ်တံခါးဖွင့်ထားပါကလုပ်ဆောင်နိုင်သည် ပန်းသီးအက်ပလီကေးရှင်း.
ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုအက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ iPhone ကို, အိုင်ပက်, Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, HomePod နှင့် Mac ။
၎င်းကိုရရှိရန်ပထမ ဦး ဆုံးအရာမှာရှိရမည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တော်၌အလိုအလျောက်ကိရိယာများ, ဤ app နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောမီးများကဲ့သို့။ အကယ်၍ သင် "ဟေ့ Siri၊ မီးကိုပိတ်ပါ"၊ "အပူထိန်းကိရိယာကိုဖွင့်ပါ" သို့မဟုတ် "တီဗွီကိုဖွင့်ပါ" ဟုပြောပါကသင်ချက်ချင်းနာခံလိမ့်မည်။
လေအေးပေးစက်၊ တီဗွီ၊ ပြတင်းပေါက်များကိုထိန်းချုပ်သည်။
အသံဖြင့်အမှာစာများအပြင်အခြားအိမ်ကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်ဥပမာအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုမိုသုံးစွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်မီးလုံးများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားများသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်များရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။
၎င်းသည် iOS အသုံးပြုသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်မဆိုအပြည့်အဝလိုက်ဖက်မှုရှိသည်။
၎င်းတွင်အလိုလိုသိပြီးအလွန်ရိုးရှင်းသော interface ရှိသည် တစ်ခုခုကို activated လုပ်တယ်ဆိုတာသတိပေးဖို့အဖြူရောင်ထွက်နေတဲ့သေတ္တာများနှင့်အတူ၊ သင်မီးဖွင့်၊ ပိတ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်တံခါးတစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်ထားခဲ့လျှင်သင်စီမံနိုင်သည်။ သင့်အိမ်၌လုံခြုံမှုရှိရန်နှင့်ဘာမှမပိတ်ရန်မမေ့သေးကြောင်းသိရန်သည်လည်းအလွန်အသုံးဝင်သည် (အမြန်ပြေးလမ်းသည်လွန်ကျူးကြောင်း)
သင်သိလိုလျှင် HomeKit အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးရသတင်းများ၎င်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောထုတ်ကုန်များဖြင့်အောက်ပါနောက်ဆုံးနာရီကိုသင်ဖတ်နိုင်သည်။
iPad များသည် iOS 16 ဖြင့် HomeKit အတွက် အိမ်သုံးကိရိယာအစုံအလင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အစပိုင်းမှာ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် Apple က iPad ဟာ ဗဟိုအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
iPad သည် HomeKit အတွက် အချက်အချာ မဟုတ်တော့ပါ။
iOs 16 သည် လုံးဝပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော Home အက်ပ်နှင့် လာမည့် Matter ပံ့ပိုးမှုကဲ့သို့ HomeKit သို့ အင်္ဂါရပ်များစွာကို ယူဆောင်လာသော်လည်း...
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
Aqara သည် ၎င်း၏ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းဖြင့် အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။
Aqara သည် HomeKit-compatible home automation ထုတ်ကုန်များ၏ ကျယ်ပြန့်သော catalog ကို ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီး ၎င်း၏ ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
Twinkly Dots၊ အပြည့်အဝပြောင်းနိုင်သော LED အကွက်အသစ်
စုစုပေါင်းအရှည် 10 မီတာ၊ RGB အရောင်များ၊ HomeKit၊ Alexa နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Twinkly LED အကွက်အသစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါသည်။
Philips Hue နှင့် HomeKit၊ ပြီးပြည့်စုံသော မဟာမိတ်များ
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
Philips Hue သည် သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးပါဝင်သည့် ဤ starter kit နှင့်အတူ Philips Hue အိမ်တွင်း အလိုအလျောက်စနစ်သုံး မီးအလင်းရောင်ဖြင့် စတင်ခဲ့သည်-...
Home Widget၊ နောက်ဆုံးတွင် HomeKit အတွက် ဝိဒ်များ [GIVEAWAY]
ကျွန်ုပ်တို့သည် အာရုံခံကိရိယာများ၊ စက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များအပါအဝင် HomeKit အတွက် ဝစ်ဂျက်များကို ဖန်တီးနိုင်စေသည့် HomeKit အတွက် Home Widget ကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
HomeKit အတွက် Meross စမတ်ပါဝါကြိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အလိုအလျောက်စနစ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်များဖြင့် အက်ပ်မှနေ၍ စက်အများအပြားကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေမည့် HomeKit အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်...
Aqara G2H Pro- HomeKit ကင်မရာ၊ နှိုးစက်နှင့် Zigbee တံတား
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျော်ကြားဆုံး HomeKit ကင်မရာများထဲမှ မျိုးဆက်သစ် Aqara G2H Pro ကင်မရာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး ...